ချောအိမာန် (မန္တလေး): 2010
မောင်လေး မျက်ဝန်းက တဖြေးဖြေးနဲ့ မျက်ရည်စများ ပြည့်လျှံတတ်လာတယ်… နောက် မျက်တောင်တစ်ချက်ပုတ်ခတ်လိုက်စဉ်မှာ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် မျက်ရည်များ တစ်ပေါက်ပေါက်ကျဆင်းလာတယ်… ရင်ထဲက ကြေကွဲမှုအပြည့်နဲ့ အပြင်ကို ပြည့်လျှံကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို ဘယ်သူမှမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူး… သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းလေးက အသနားခံနေသလို… သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးက ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုတစ်ခုကို တောင်းဆိုနေသလိုဘဲ… သူရဲ့ဘေးမှာ ကျွန်မ တစ်ဦးတည်းသော အစ်မက မျက်ရည်မကျအောင် အားတင်းရင်း… မောင်ငယ်လေးကိုပွေ့ဖက်ထားတယ်… ဆရာဝန် သူနာပြုအသီးသီး ထွက်ခွာသွားချိန်မှာ… ဆယ့်သုံးနှစ်သာသာရှိသေးတဲ့ ကျွန်မက မျက်ရည်ကိုလက်နဲ့ပွတ်သပ်သုပ်လိုက်တယ်… ခုနှစ်နှစ်သာသာလောက်ရှိမဲ့ မောင်ငယ်လေးကို တတ်နိုင်သလောက်အားပေးနေတဲ့ ကျွန်မတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်း ဘေးကုတင်ကလူတွေပါ မျက်ရည်တလည်လည်နဲ့… ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ အားကိုး မှီတွယ်စရာဆိုလို့ ဒီမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ပဲ ချန်ထားခဲ့တာကို ကံကြမ္မာကိုဘဲ အပြစ်တင်ရမလား… သွားလေသူမိဘနှစ်ပါးကိုဘဲ အပြစ်တင်ရမလား… တကယ်တော့ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးအတွက် လောကကြီးကတရားမမျှတခဲ့ပါဘူး … ဆေးရုံကိုတောင် ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာထောက်ထားသူတစ်ယောက်က လာပို့လို့ရောက်လာတာ… မောင်လေးက တော်တော်ရောဂါသည်းနေပြီ… ကူညီရာမဲ့တဲ့ဘဝမှာဖြစ်သလိုနေ… ဖြစ်သလိုဆေးတွေကုပေးကြရင်း၊ အနာတခြား၊ ဆေးတခြားနဲ့ နာလန်မထူတော့ဘူး… သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ ဗဟုသုတမရှိ၊ နားမလည်၊ ဟိုလူတမျိုး၊ ဒီလူတမျိုးနဲ့ ကုထုံးတွေကလဲစုံနေပြီ… နောက်ဆုံး ရလာဒ်ကတော့ လူနာပိုခံစားရတာပေါ့… ဆရာဝန်က သက်ပြင်းချရင်း… မောင်လေးရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် စိုးရိမ်နေပုံဘဲ… ဆေးရုံမှာ ခုနှစ်ရက်ကုသပြီး ကလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့ဂေဟာကို လမ်းညွန်ပေးလိုက်တယ်… လမ်းညွှန်ပေမဲ့ ဘယ်သူကမှ တာဝန်ယူပို့ပေးမဲ့သူမရှိဘူး၊ ပိန်ညှောင်ညှောင်ခန္ဓာကိုယ်လေးပေမဲ့ မောင်လေးမျက်ဝန်းတွေက မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးသလိုဘဲ… ကျွန်မက မစားဘဲ အငတ်ခံပြီး မောင်ငယ်လေးကိုကျွေးတယ်… တခါတလေဝမ်းတွေ အိပ်ရာပေါ်သွားပြစ်လိုက်တာမို့… စိတ်ရှည်ရှည် မောင်းလေးကိုလဲ ပြုစုပေးတယ်… မနေနိုင်တဲ့ ဘေးကုတင်လူတွေက မုန့်ဖိုးပေးတယ်… ဆန်ပြုတ်တွေ ဝယ်တိုက်ကြတယ်… အဲဒီအခါဆို ကျွန်မက မောင်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ မုန့်ပေးတဲ့သူ… ဆန်ပြုတ်ဝယ်တိုက်တဲ့သူတွေကို ထိုင်ကန်တော့တယ်… ကြာတော့ အခန်းထဲက လူနာတွေက ကျွန်မတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို သံယောဇဉ်ဖြစ်နေကြတယ်… တစ်နေ့က သူတို့အခန်းထဲကို ကလေးလူနာတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်… သွေးလွန်တုပ်ကွေးဆိုလား… ငှက်ဖျားဆိုလားဘဲ… ကလေးက သတိတောင်သိပ်မရဘူး…ညကြီးရောက်လာတာ… သွေးကအရေးပေါ်လိုပါလေရော… ဆရာဝန်တွေလဲ ပျာယာခတ်နေတာပေါ့… ကလေးအဖေနဲ့အမေကလဲ ပြည့်စုံပေါ်မပေါက်ဘူး… နှစ်ယောက်စလုံး ပိန်ချီချီလေးတွေနဲ့လိုတဲ့သွေးက အိုသွေးတဲ့… အဖေနဲ့ အမေကလဲ သွေးယူရအောင် ကျန်းမာရေးက မပြည့်စုံ ၊ မကောင်းမွန်ဘူး… အချိန်နဲနဲကြာသွားတယ်… ကျွန်မက ဆရာဝန်ကိုသွားပြောတယ် ကျွန်မသွေးကိုယူပါ… အိုသွေးပါပဲလို့… ဆရာဝန်က မျက်လုံးပြူးသွားတယ်… ကလေးဆီက သွေးယူလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွယ်လို့ ဆရာဝန်က စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောရင်း ထွက်သွားတယ်… ညဉ့်နက်လောက်မှာသွေးရပြီး… အဲဒီကလေးကို အဆက်မပြတ်သွေးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်… ကံကောင်းစွာဘဲ၊ အဲဒီကလေး…. စိုးရိမ်တွင်းထဲကနေ သီသီလေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်… အခန်းထဲက အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးရင်း… တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဆိုးလာတဲ့သူ့မောင်လေးအတွက်တော့ စိတ်ထိခိုက်… ကြေကွဲစွာခံစားရတယ်… ( ၂ ) “ မမ … မောင်လေး ဆေးရုံတတ်ရတာလဲကြာပြီ… အိမ်မပြန်ရသေးဘူးလား “ “ ပြန်ရမှာပေါ့မောင်လေးရယ်… ခုဟာက မမတို့အိမ်ထက်ကောင်းတဲ့နေရာ တစ်ခုကိုသွားရမှာ “ “ ဘယ်လဲဟင်… ပျော်စရာကြီးလား “ “ ပျော်စရာကြီးပေါ့… အဲဒီမှာ မောင်လေးလို အဖော်ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ် အတူတူကစားရမှာ “ “ ဟုတ်လား… မမရောနေမှာလား “ “ မမက ခဏခဏ မောင်လေးကို လာကြည့်မှာ… “ “ မောင်လေးနဲ့ အတူမနေဘူးလား “ “ အိမ်ကို ဒီအတိုင်းထားခဲ့လို့ မဖြစ်သေးဘူး မောင်လေးရဲ့… အဲဒီမှာဆိုရင် မောင်လေးနဲ့အတူတူ ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးဘဲ… ဒီမှာလို ဘယ်သူမှမောင်းမထုတ်ဘူးနော် မောင်လေး “ “ ဟင့်အင်း … မမလဲလိုက်ရမှာ “ “ လိုက်မှာပါ… အဲဒီမှာကျ မောင်လေးကို ကြည့်ရှုပေးမဲ့ ဆရာမ ချောချောတွေလဲရှိတယ်… မောင်လေးဆွဲချင်တဲ့ ပန်းချီပုံတွေဆွဲရမယ်… စာတွေကို ရုပ်ပုံတွေနဲ့လဲ သင်ပေးဦးမှာ… ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ… အော်… မောင်လေးကြည့်ချင်တဲ့ တီဗွီကြော်ငြာတွေလဲကြည့်ရအုံးမှာ… မောင်လေး နံမည်ပေးထားတဲ့ မင်းသားနံမည် ဘယ်သူ… “ မင်းမော်ကွန်း “ “ ဟုတ်ပြီ… ဟုတ်ပြီ မင်းမော်ကွန်း… အဲဒီမှာ လွင်မိုး၊ ကျော်ဟိန်းတို့ ခိုင်သင်းကြည် ထက်ထက်မိုးဦးတို့ဆိုတဲ့ မောင်လေးအရွယ်ကလေးတွေလဲရှိတယ်…မောင်လေးပျော်မှာပါ… မမက မောင်လေးကို အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာ စိတ်မချဘူး… မောင်လေးကျန်းမာရေးအတွက်လဲ မမကနားမလည်ဘူး… အဲဒီအတွက်လဲပိုစိတ်ချရတယ်… နော် မောင်လေး ဘယ်တော့မှမငိုရဘူးနော်… ငိုရင်ယောက်ျားလေးမဟုတ်ဘူး… မိန်းမဖြစ်သွားလိမ့်မယ်… မိန်းမဖြစ်ချင်လား “ လူငယ်လေးကခေါင်းရမ်းပါတယ်.. “ အဲဒါဆို မမပြောတာ နားထောင်နော် “ လူငယ်လေးက သူ့အစ်မကိုကြည့်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပါတယ်…ဘေးကုတင်က လူတွေရော သူနာပြုတွေပါ… စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ဘယ်သူမှ ပြုပြင်ဖန်တီးမပေးနိုင်တာမို့… ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်….``ရပါတယ်… အဒေါ်ရယ် … ကျွန်မတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို ဒီဆေးရုံပေါ်မှာ ကြည့်ရှု့ခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ကျွန်မအဒေါ်ကို ကန်တော့ပါတယ်.. မောင်လေးကုတင်ပေါ်ကနေ လက်လုပ်ချီကန်တော့````နေ.. နေ.. အဒေါ်တို့က အဒေါ့်သားလေးနဲ့အတူတူ ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါ ။ ဆေးရုံက ဆင်းသွားပြီးရင်လဲ ဂ၇ုစိုက်နော်… ကိုယ်ကိုတိုင်လဲဂရုစိုက်အုံး.. ကောင်းသွားမှာပါ.. သိပ်စိတ်မပူနဲ့ … ဒါနဲ့အေ.. နာမည်ပြောခဲ့ပါဦး။ နံမည်မသိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်````မောင်လေးနာမည်က သုတ.. ကျွန်မနာမည်က မသုခပါ````အော်…``နာမည်နဲ့ မလိုက်ဖက်တဲ့… ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်း အဒေါ်ကြီးလဲ ကြေကွဲသွားပုံရပါတယ်.. သူက ဆေးရုံခန်းထဲက အခြားလူနာရှင်တွေကိုပါ စည်းရုံးရေးဆင်းရင်း …. ပိုက်ဆံစုပြီး ကျွန်မလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်…``ယူပါမသုခရယ်… အဒေါ်တို့က ကူညီချိန်တန်လို့ ကူညီရတာပါ.. ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်.. သိပ်မများပေမဲ့.. မောင်လေးအတွက် အာဟာရဖြစ်တဲ့ အစာတော့ ဝယ်ကျွေးနိုင်တာပေါ့````ဟုတ်ကဲ့ပါအဒေါ်.. အဒေါ်ကိုမြင်ရတာ.. ကျွန်မမေမေကို အရမ်းသတိရတာဘဲ ကျွန်မဖေဖေနဲ့ မေမေဟာလဲ ရောဂါဆိုးနဲ့ဆုံးခဲ့တာ.. ခုမောင်လေးလဲ…ကောင်မလေးက ပြောရင်း မျက်ရည်တွေကျလာတယ်…``မောင်လေးမှာ HIV ရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီတဲ့.. ဒီနေ့ ဆရာဝန်ကြီးက ပြောပြတယ်.. ကျွန်မနဲနဲမှ မရိပ်မိခဲ့ဘူး.. ဒါ့ကြောင့်မို့ထင်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့ကို ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေကလဲ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြဘူး.. နှိမ်ကြတယ်.. မောင်လေးနဲ့ဆို ဘယ်သူမှ မကစားချင်ကြဘူး.. မောင်လေးကို ကျွန်မသနားတးယ်.. သူ့မှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဘာမှ မသိရှာဘူး..``ကျွန်မလဲ တချိန်မှာ ဒီရောဂါရှိချင်ရှိလာမှာဘဲ.. ကျွန်မအတွက် မစိုးရိမ်ပါဘူး.. မောင်လေး ခုလိုခံစားနေရတာကို ရင်ထဲမှာ မချိဖြစ်နေပြီ… ```ကျွန်မက ရင်ထဲကစကားတွေကို ပြောပြီး မောင်လေးအိပ်နေတဲ့ကုတင်ဆီသွားရင်းရှိစုမဲ့စု.. ပစ္စည်းလေးတွေကို ခြင်းတောင်းထဲ ကောက်သိမ်းမိတယ်…မနက်ဖြန်မနက်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ကို ဒီကုတင်လေးမှာတွေ့ရတော့ မှာမဟုတ်လို့ အခြား ကုတင်ကလူတွေ လာပြီး နှုတ်ဆက်အားပေးနေကြတယ် …..(၃)မောင်လေးကို ကျွန်မသွားကြည့်တိုင်း.. ဂေဟာမှာပျော်နေတာကိုတွေ့ရရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်.. တခါတလေမှာတော့ ရောဂါဖောက်နေတာမို့ သနားရပြန်တယ်.. ရောဂါသည်အချင်းချင်း ကလေးတွေကူညီဖေးမနေတာဟာ.. လူသားချင်း စာနာတဲ့စိတ်ဓါတ်လေးတွေပါဘဲ.. မောင်လေးက ကျွန်မလာရင် ပျော်ပြီး .. ပြန်သွားတိုင်း.. လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးကြည့်ရင်း ကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်..ပန်းချီဆွဲဝါသနာပါသူမို့ မောင်လေးဆွဲတဲ့ ပန်းချီတွေဟာ ရင်ခုန်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတယ်.. လူမိသားစုပုံ.. ကြက်မိသားစု အစာစားနေတဲ့ပုံ.. ကလေးတွေ ကစားနေပုံ.. သူဆွဲတဲ့ပုံတွေကို ထုတ်ပြတက်တယ်…သူအဲဒီဂေဟာလေးမှာ နေသားကျသလိုရှိလာတယ်.. ဒါပေဲ့ သေမင်းရဲ့ အမိန့်ပါလာပြီးသူ တစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေသားကျနိုင်မှာလဲ.. ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သွေးတော်တဲ့တစ်ဦးတည်းသာရှိတဲ့ မောင်လေးအတွက် .. ကျွန်မရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေဟာ မှေးမှိန်နေတယ်.. သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ နာကျင်စရာတွေ ဝမ်းနည်းစရာတွေပါမသွားစေချင်ဘူး.. ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆို သူသိမ်ငယ်နေရမှာ…ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မမောင်လေး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါထိုးနှက်ချက်တွေရှိပါစေ.. အားလုံးရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ.. မောင်လေး ဘဝ နေပျော်ပါတယ်.. မောင်လေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ မမတက်နိုင်တာဆိုလို့… ဒါပါဘဲ.. နေ့တိုင်းဘဲ မောင်လေးအကြောင်းစဉ်းစားမိရင.. ရင်နာတယ်.. နောက်ဆိုရင် ကျွန်မလဲ အထီးကျန်ဆန်စွာ တစ်ယောက်ထည်း ဖြစ်သန်းရအုံးမယ်.. ဘယ်အချိန်တွေထိလဲ .. ဘယ်လောက်ထိလဲ.. ကျွန်မလဲ မသိနိုင်ခဲ့ဘူး…ဒီလိုနဲ့ဘဲ တဖြေးဖြေး ရိပါးလာတဲ့အနာဂါတ်တွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရင်း ကျွန်မဆီမှာ နောက်ဆုံးကျန်ရှိခဲ့တာ မောင်လေးရေးထားတဲ့ ပန်းချီအပိုင်းအစလေးပေါ့.. သစ်ပင်.. တောအုပ်စိမ်းစိမ်းတွေထဲမှာ လက်ချင်းတွဲပြီးပြေးနေကြတယ်.. ကျွန်မနဲ့ မောင်လေးဘဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..အောက်ကနေ စာလေးတစ်ကြောင်းရေးထားတယ်…မောင်လေး မမကို ချစ်တယ်တဲ့…ကျွန်မမျက်ရည်တွေဟာ တာကျိုးသွားတဲ့အတိုင်းဘဲ.. ရင်ထဲမှာလဲ .. စို့နစ်ကြေကွဲမိတယ်.. ဘဝရဲ့အားမာန်တွေကို နောက်ဆုံးအချိန်တွေထိ ယူဆောင်သွားတဲ့ မောင်လေးကိုလဲ မမချစ်တယ်.. အချစ်ဆုံးပါဘဲ.. ဒီရောဂါကြီးဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဘဲကူးစက်လာခဲ့.. လာခဲ့.. နောက်ဆုံးမှာတော့ ကြေကွဲရိပ်တွေနဲ့ဘဲ အဆုံးသတ်ရတယ်.. အဲဒီလိုနဲ့ ကျွန်မမောင်လေးရဲ့ အသက်ကို နှမျောစွာနဲ့ စတေးလိုက်ရတယ်…ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်မှာ .. ကိုယ်တိုင်မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ ကျွန်မအသက်နှစ်ဆယ်ရောက်သည်ထိ ဆေးစစ်ရာမှာ HIV Positive ဆိုတာ မတွေ့ခဲ့ရဘူး.. ကျွန်မခုချိန်မှာ ကံကောင်းသေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့.. ကျွန်မခုဆိုရင် … ဒီရောဂါဖြစ်နေသူတွေကို အားပေးကူညီ ရန်ပုံငွေကူရှာပေးနဲ့ ဘဝကို ပျော်ပျော်ကြီး နေထိုင်သွားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…လရဲ့အရိပ်ဟာ ဝေးလွန်းပေမဲ့ ညအခါတွေမှာဆို အဖိုးတန်မှန်းလူတိုင်းသိကြပါတယ်.. အဲဒီလိုဘဲ… ကျွန်မရဲ့ ဆန္ဒ ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာ တွေဟာဝေးလွန်းပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့အခါမှာတော့ .. ဝေးလွန်းတဲ့ လရိပ်ကို တမ်းတမိသလို……. ဆန္ဒရှိကြတယ်ဆိုရင် ကျွန်မကျေနပ်မိမှာ အမှန်ပါ……..။
ဒုံး…. ဒုံး… ဒုံး…``ဟာ အခန်းထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ … သွားကြည့်လိုက်ပါအုံး..``အခန်းထဲမှာ ကျော်မင်းလွင် ထင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေပြီနေမှာ… သူက ဒီလိုဘဲ စိတ်ကြီးပြီး မထင်ရင် မထင်သလို လုပ်တက်တယ်.. တစ်ဆောင်တည်း တစ်ခန်းထဲ အတူတူ နေရတာဆိုတော့ သည်းခံရတာပါဘဲ.. ခုလဲ အပြင်မှာ ရေချိုးပြီး ရှိသေးတယ် အထဲမှာ တဒုံးဒုံးနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မသိဘူး မင်းသွင်က ရေချိုးလက်စနဲ့ လှမ်းအော်ပြီး ပြောတယ်.. သူ့ပစ္စည်းတွေ တစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးလို့ နေမှာ……. တခါတုန်းက မင်းသွင် ဂစ်တာကြီး ထုလိုက်တာ ကွဲရော.. ကျွန်တော် အခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်တော့….``ဟာ`` .. ဟေ့ကောင် ကျော်မင်းလွင် ဘာဖြစ်တာလဲ``ကျော်မင်းလွင် လက်မှာ သွေးသံရဲရဲနဲ့ ဒါဏ်ရာကြောင့် လန့်သွားတယ်… ကျော်မင်းလွင် က နံရံကို ဆက်ထိုးဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်စဉ်မှာ လက်ကို နောက်ကဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်..``မင်း ဘာဖြစ်နေတာလဲ .. လက်မှာလဲ ဒဏ်ရာရနေပြီ.. ဘယ်သူနဲ့ ရန်ဖြစ်လာလို့လဲ`` ကျော်မင်းလွင် က ခေါင်းရမ်းပြီး နံရံကို ကျန်တဲ့ လက်တဖက်နဲ့ ထပ်ထိုးတယ်…``ဟာ… မင်းကတော့ကွာ.. စိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားစမ်းပါ ဘာဖြစ်လာတာလဲ ပြော.. လာ .. ကုတင်ပေါ်ထိုင်… မင်းလက် ဆေးထည့်ပေးမယ်````ကျော်မင်းလွင်.. ဟာ ဘာဖြစ်တာလဲ`` မင်းသွင်ကရေချိုးပြီး ဝင်လာရင်းမေးတယ်..``ဒီမှာ ကွာ.. မေးပါအုံး နံရံလက်သီးနဲ့ ထိုးထားတာ.. ဘဖြစ်မှန်းလဲ မသိဘူး````ဘာဖြစ်လို့လဲ.. မင်းအိမ်နဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပြန်ဘူးလား````မဟုတ်ဘူး… မဟုတ်ဘူးကွာ.. ငါ့ကို ဘာမှ မမေးကြပါနဲ့…````မင်းကလဲကွာ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းဘဲ ဘာအဆင်မပြေတာရှိလဲ ပြောရမှာပေါ့ ငါတို့တုန်းကလဲ မင်းကူညီခဲ့တာတွေရှိတာဘဲ`` ``အခုဟာက အကူညီယူရမဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွ.. တော်ပြီကွာ ငါမပြောပါရစေနဲ့… မင်းတို့လဲ ငါ့ကို ကြည့်မနေပါနဲ့..``ဆေးထည့်ပေးတော့ စိတ်နဲ့လူ မကပ်သလို ငြိမ်နေပြီ… ကျော်မင်းလွင် မျက်လုံးတွေက တစ်နေရာတည်းစိုက်ကြည့်ပြီး ထွေထွေငေးငေး ဖြစ်နေတယ်.. သူ့မျက်လုံးတွေက ထူးဆန်းစွာ ဒေါသရိပ်မသန်းဘဲ တစ်မျိုး ဘာကြောင့် ဖြစ်နေတာလဲ .. ခါတိုင်း.. သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လာတာနဲ့ မတူ…….မိဘတွေနဲ့ အတူမနေဘဲ စိတ်ထင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အသုံးချဖို့ အဆောင်လာနေတာမို့.. စရိုက်က ခပ်ဆိုးဆိုးပင်.. တစ်ချို့နေရာတွေမှာ စိတ်ကောင်းရှိပေမဲ့… တချို့ နေရာကျ ဂျစ်ကန်ကန် ငွေကိုတော့ တခါတခါ အိပ်ပြန်တောင်းပြီး နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်သား ဘဝကို ပျော်ပျော်နေနေသူ.. အိမ်နဲ့ကလဲ အဆင်ပြေလှတာမဟုတ်…``ငါခရီးထွက်မယ်ကွာ````ဟ.. ဘယ်ဖြစ်မှာတုန်း.. စာမေးပွဲရှိသေးတယ်..````စာမေးပွဲ ပြီးမှ ငါတို့ အတူတူသွားမယ် လို့ ပြောထားတယ်လေ… မင်းခံစားနေရတာမဟုတ်သေးဘူး.. ဘာလဲ မင်း ကောင်မလေးနဲ့ အဆင်မပြေဘူးလား````မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. ငါ အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်````ငါတို့ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ.. မင်းခုလို စိတ်ညစ်တဲ့ ပုံစံ တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး..``မင်းခုလိုဖြစ်နေတော့ ဘာမှန်းမမသိဘဲ .. မပျော်တော့ဘူး````ထားလိုက်ပါတော့ကွာ… ``လောကမှာ ကျွန်တော့် လောက်မိုက်မဲတဲ့ ကောင်ရှိပါအုံး မလား…ကျွန်တော့် အပြစ်ဒါဏ်ကြောင့် အခု မျက်ရည်ကျနေရပြီ.. ဘဝနဲ့ ချီပြီးပြောရရင် ဆယ်တန်းတုန်းက တစ်ခါဘဲ စာမေးပွဲကျလို့ မရိုက်ဖူးတဲ့ ဖေဖေက လက်သီးနဲ့ ထိုးလို့ မျက်ရည်တစ်ခါဘဲ ကျဘူးတယ်.. ငယ်ငယ်ကလဲ ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် ပေခံပြီး မငိုခဲ့ဘူး.. ခုတော့ ရင်ထဲက တဆစ်ဆစ်နာကျင်မှုက အလိုလို မျက်ရည်တွေ ဝိုင်းလာစေတယ်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင် ဒေါသဖြစ်မိရင်း… ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိနိုင်တော့… ငါဘယ်သူ့ကို ဖွင့်ပြောရမှာလဲ.. ငါဖွင့်ပြောရလောက်အောင် သတ္တိမရှိဘူး.. ငါ့ကိုယ်ငါတောင် ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ .. ခွင့်မလွှတ်ကြပါနဲ့ကွာ…`` သုတ `` မင်း မျက်နှာကို ငါမကြည့် ပါရစေနဲ့….ငါ့အတွေးတွေနဲ့ နေပါရစေ… အရာအားလုံးဟာ .. ကြီးမားတဲ့ ရိုက်ခက်သံတစ်ခုလို လောက မြေပြင်တစ်ခုလုံး တုန်လှုပ်သွားသလို ခံစား သွားရစေတယ်….(၂)``ဟေ့ကောင်.. ဒီနေ့ ဘယ်လိုလဲကွ .. အခြေအနေ တိုးတက်ရဲ့လား``သုတ က ခေါင်းခါတယ်``မင်းကွာ .. အသုံးမကျလိုက်တာ.. ကိုယ့်ကောင်မလေးတောင် ကိုယ်မပီဘူး````ဟာ.. မင်းတို့ ပြောသလို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ````အဲဒါကြောင့် မင်းကို မိန်းကလေးတွေရဲ့ အထာမနပ်ဘူးလို့ ပြောတာပေါ့````မင်းကောင်မလေးကို အပိုင်းသိမ်းပိုက်ထားလိုက် .. စိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူး.. ဒါမှ သူလဲ နောက်တစ်ယောက် မပြောင်းမှာ````သူက ငါ့ကို ချစ်ပါတယ် မပြောင်းပါဘူး````မင်းက အစိမ်းသက်သက်ကို ဒီတစ်ယောက်ထားပြီး .. ဒီတစ်ယောက်ို အရူးအမူးဖြစ်နေတာ.. မင်း ငါ့ကို မမြင်ဘူးလား .. နှစ်ယောက် တပြိုင်ထည်းထားတာတောင် ဘယ်သူက စိတ်ဆိုးလဲ .. သူတို့ကို အပီသိမ်းသွင်းထားလိုက်တာ ဟား.. ဟား..``ကျော်မင်းလွင် က ရယ်ရင်း သုတ ကို ခေါင်းအုံးနဲ့ လှမ်းပြစ်တယ်…``မင်းအခြောက်ပုံစံ လုပ်မနေနဲ့ .. ကြာရင် ခြောက်သွား အုံးမယ်.. မင်းသွင်ကို ကြည့် ငါ့ရဲ့ လက်ချာတွေကို အပြည့်အဝ အသုံးချလိုက်တာ.. သူ့ကောင်မလေးဆို ခွာတောင် မခွာနိုင်တော့ဘူး````ဟုတ်တယ် သုတ တခါတလေကျ မိန်းကလေးတွေက တစ်မျိုးဘဲ .. သူတို့ ရက်ရောစွာပေးတဲ့ သစ်သီးကိုစားရတာ သိပ်အရသာမရှိဘူး.. စေတနာမရှိတရှိလေးပေးမှ စားသုံးရတာ ပိုအရသာတွေ့တာကွ.. ပြီးတော့ ပိုပြီး ရင်းနှိးသွားသလို စိတ်ချင်းလည်း ပိုနားလည်သွားတယ်````ငါတို့က ရည်းစားဖြစ်တာ မကြာသေးတော့.. ````မင်းကလဲ သတ္တိမရှိလိုက်တာ လွန်နေတာဘဲ````မဟုတ်ပါဘူး.. ငါက ငါ့ကောင်မလေးကို ဘာမှ မလုပ်ရက်ဘူး.. နမ်းချင်ရင်တောင် တခါတလေလေးမှ…````ဟား… ဟား.. ဟား.. မင်းကွာ ရယ်ရတယ်.. ခြောက်တယ်ပြောတော့လဲ မခံနိုင်ဘူး .. အဲဒီလို သွားလုပ်နေရင် ဟိုက နောက်တစ်ယောက်နောက် ပါသွားလိမ့်မယ်.. ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မင်းလို အရိုးစွဲနေတဲ့သူ ရှာမှရှားဘဲ… ခေတ်နဲ့ အမှီလိုက်နိုင်ဖို့ ငါ့ဆီမှာ ပညာယူလိုက်အုံး … မင်း အစမို့လို့ပါကွာ…နောက်တစ်ပါတ်ကျ မင်းကောင်မလေး နဲ့ တွေ့မှာ ဟုတ်လား…ငါ လက်ချာပေးမယ်````တော်ပါပြီ ကွာ````ခက်နေပါပြီ.. ဉာဏ်ပူဇော်ခ တပြားမှ မယူဘူး ဒီလိုဆရာမျိုး ရှာကြည့်အုံး အခြောက်ကလေးရဲ့``သုတ က သူ့ကို အခြောက်လို့ ခေါ်ခံရတာကြောင့် မျက်နှာပျက်ပြီး မခံချင်စိတ်နဲ့…``ငါ့ကို အခြောက်လို့ မခေါ်ပါနဲ့ .. ငါယောက်ျားပါကွ.. မင်းတို့ဆီမှာ ဒီတညတော့ တပည့်ခံလိုက်မယ်````ဟား… ဟား.. ဟား…. ဒီလိုမှပေါ့ကွ .. ကျော်မင်းလွင်ရဲ့ ဒုတိယ တပည့်ကျော်ပေါ့…သုတ က ကျွန်တော့်တို့ထဲမှာ အရိုးသားဆုံး ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ပါ၊ ဘယ်အရာမဆို စဉ်းစားချင့်ချိန်လွန်းစွာ လုပ်တက်တယ် .. ပြောလိုက်ရင်လည်း ဘာမှ မသိသလိုလိုနဲ့ သူ့ကိုယ်သူလဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ကင်းရှင်းကြောင်း လေလုံးထွားတက်တာကြောင့်… ကျွန်တော်တို့ သူ့ကိုမြှောက်ပေးမိတယ်… နောက်ဆုံးတော့ မခံချင်စိတ်နဲ့ ယောက်ျား မာန တက်လာပြီး … ``ငါမင်းတို့ ထက် မညံ့စေရဘူး`` လို့ ဟစ်ကြွေးသွားတယ်.. အမြဲတမ်း အခန်းထဲ ဝင်လာတိုင်း ကျွန်တော်တို့ မေးလိုက်ရင် ကျဆုံးခန်း ဝင်လာတဲ့ သူက ကျွန်တော်တို့ စကားတွေကို မခံချင်စိတ်နဲ့ ခုခံလာချင်ပုံရတယ်.. အဲဒီလိုဖြစ်အောင်လဲ သူ့စိတ်ကို အပြတ် နှိုးဆွပေးလိုက်တယ်….သူ့ကောင်မလေး နဲ့ ပတ်သတ်ရင် အဖြစ်သည်းပြီး အချစ်ကြီးလွန်းတယ် .. မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကိုလည်း သဝန်တိုတက်တယ်.. ကောင်မလေးပါးလေးနမ်းဖို့ကိုတောင် .. ပါးရိုက်ခံရမှာကြောက်တဲ့ကောင် .. ကျွန်တော်တို့ ပြောတော့ လက်ထပ်မယ်လို့ အတည်ရည်စူးထားတာမို့ .. သူ့ကောင်မလေး စိတ်ဆိုးသွားမှာကို သေမလာက်ကြောက်တဲ့သူ.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကားလုံးတွေကို သူကြာရှည်မခံနိုင်တော့ဘူး… အဓိက ကတော့ သူ့ကို အခြောက်လို့ ပြောရင် အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်… သူ့အားနည်းချက်တွေကို သိထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့က .. သူ့စိတ်ကို ပိုပြီး မခံချင်အောင် မြှောက်ပေးမိတယ်…အဲဒီညက .. လကြီး ထိန်ထိန်သာ နေပါတယ်.. မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်တို့ ညဉ့်နက်မှ အိပ်ဖြစ်တယ်….………ဒီနေ့ မင်းသွင်နဲ့ ကျွန်တော် သုတ အစား ရင်ခုန်နေမိတယ်… သူ့ကောင်မလေး နဲ့ တွေ့ဖို့ သွားတယ်… ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ကတိပေးသွားလေရဲ့ … တံခါးခေါက်သံအကြားမှာ ကျွန်တော် မင်းသွင်ကို မျက်စပစ်ပြလိုက်တယ်… မင်းသွင်က တံခါး ဂျက်ကို သွားဖွင့်ပေးတယ်.. သုတ က အခန်းထဲဝင်လာပြီး အိတ်ကို အိပ်ရာပေါ်ပစ်ချရင်း . ကျွန်တော်တို့ မမေးခင်မှာဘဲ လက်မထောင်ပြတယ်..``ဟား … ဟား… တော်တယ်ကွာ ဒါမှ ငါ့တပည့် … လုံးဝ အိုကေတယ်မဟုတ်လား````မင်းတို့ ငါ့ကို အခြောက်လို့ မခေါ်ရတော့ဘူး````အေးပါကွာ … မခေါ်တော့ပါဘူး .. ကောင်မလေး စိတ်ဆိုးလား````ငါ့ကို အရမ်းချစ်တော့ မဆိုးပါဘူး````ငါမပြောဘူးလား.. မဆိုးပါဘူးလို့ .. ဝမ်းသာတယ် သူငယ်ချင်း ကဲ ဒီနေ့ညနေ မီးမီး နဲ့ ချိန်းထားလို့ ရေသွားချိုးလိုက်အုံးမယ်.. အိုကေ .. သူငယ်ချင်း``ကျွန်တော်ည ပြန်လာတော့ အိပ်မပျော်ဘဲ ရှိနေသေးတဲ့ သုတ ကို တွေ့ရတယ်..``ဟေ့ကောင် မအိပ်သေးဘူးလား.. ဘာလဲ .. သတိရနေတာလား````ငါ ပြန်တွေးရင်း .. ငါ့ကိုယ်ငါ ဒေါသဖြစ်နေမိသလိုဘဲ … မှားပြီးလားလို့ လဲ တွေးမိတယ်…````ဟာ … မင်းကလဲ အတွေးလွန်ပြန်ပြီ .. ပြီးသွားတာကို ပြန်တွေးမနေနဲ့ ဘာမှ မမှားဘူး .. အိပ်ကြစို့```တကယ်တော့ သူ အိပ်ရာဝင်ပေမဲ့ အိပ်မပျော်ခဲ့မှန်း ကျွန်တော် သိတယ် ကျွန်တော် သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကျိတ်ပြုံးပြုံးမိနေသေးတယ်.. သူ့ကောင်မလေး ကို သူခေါ်တဲ့ ``ဂျူးဂျူး`` ကလွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမသိ .. သူ့ကောင်လေး လောက် အိနြေ္ဒ သိက္ခာကြီးတာ မရှိတဲ့ အကြောင်း မကြာခဏ ပြောတက်လွန်းတာကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ မင်းသွင် သုတ ကိုမြှောက်ပေးခဲ့တာ… ကဲခုတော့ နှစ်ယောက်စလုံး ဘာတက်နိုင်သေးလဲ နောက်ဆိုရင် သူ့ဆီက အဲဒီစကားတွေ ကြားရတော့မှာ မဟုတ်… နောက်ဆုံး.. အချစ်ဆိုတာ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး.. လို့ တွေးရင်း ကျွန်တော် သဘောကျစွာ ပြုံးမိသေးတယ်……(၃)ဒီနေ့ ပိုက်ဆံ အသုံးပြတ်သွားလို့ … အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်… အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူး… အလှူသွားကြတယ်တဲ့.. ခိုင်းတဲ့ ကောင်မလေးသာ ကျန်ခဲ့တာမို့ .. ပိုက်ဆံစုတက်တဲ့ ညီမလေး ``နေရီသွင်`` အခန်းထဲဘဲဝင်ခဲ့တယ်… ခါတိုင်းလဲ အံဆွဲထဲက ညီမလေး ပိုက်ဆံအိတ်ကို နှိုက်ပြီး စာရေးထားနေကျမို့ အံဆွဲကိုဖွင်တော့ ပိုက်ဆံအိတ် မတွေ့ဘူး…. တခြားနေရာမှာလဲ မတွေ့… ဒါနဲ့ စားပွဲပေါ်က စာအုပ်တွေကြားထဲများ ညှပ်ထားမလားလို့ ရှာကြည့်သေးတယ်… ပိုက်ဆံတော့ တွေ့ဘူး … စာအုပ်တစ်အုပ်ကြားထဲက ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံထွက်ကျလာတယ်…..ကျွန်တော့် မျက်လုံးတွေ ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ရင်း ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွားတယ်… ရင်တွေလည်း တဒိန်းဒိန်း ခုန်လာတယ်….ဓါတ်ပုံက သုတ ရဲ့ ဓါတ်ပုံဘဲ …. ဓါတ်ပုံရဲ့ နောက်ကျောမှာ.. ချစ်ဆုံး ဂျူးဂျူး အတွက် အမှတ်တရ သုတ လို့ ရေးထားတဲ့စာက ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီး သွေးပျက်သွားစေခဲ့တယ်… ညီမလေးနဲ့ သုတဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ လုံးဝ မသိခဲပေ…… သုတ ကလဲ လျှို့ဝှက်လွန်းသူမို့ ဘာမှမသိခဲ့ရ .. ခုတော့ … သွားပြီ … ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကိုယ့်လက်နဲ့ရိုက်ရင်း ယူကျုံးမရ ဖြစ်မိတယ် … ခုတော့ ညီမလေးဟာ … ကျွန်တော့်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ပြီ … နှမချင်း မစာနာဘဲ မြှောက်ပေးမိတဲ့ ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့် ခု ကိုယ့်ညီမဖြစ်နေပြီ……အားလုံး ငါ့အပြစ်တွေပါ… ရိုးသားတဲ့ သုတ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ချိုးနှိမ်ခဲ့တာ ငါ့အပြစ်ပါ .. သုတ မင်းမှာ အပြစ်မရှိပါဘူး… ငါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ… မင်းကို ငါဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရလဲ … မင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖြူစင်ခြင်းကို ငါ…. အရောင်ဆိုးခဲ့တာ…. မင်းရော ညီမလေးရော … ငါ့ကို မခွင့်လွှတ်ကြပါနဲ့….ခု ငါ့ရင်ထဲမှာ …. ဒီအစိုင်အခဲကြီး တစ်ခုက ဝင်ရောက်ပြီး အချိန်ပြည့် စိုးမိုးနေတယ် … ငါအရမ်းခံစားရတယ် .. မင်းရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ငါဘယ်လို ဖြေရမလဲ … တစ်ချိန်ကျရင် ငါနဲ့ နေရီ မောင်နှမဆိုတာ မင်းသိလာမှာဘဲ … မင်းဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ … အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်လိုက်တာ… ဒီအပြစ်တွေကို ငါ…. ဘယ်မျက်နှာနဲ့ မင်းကို ပြောပြနိုင်မှာလဲ … ငါတို့တွေ ဝေးသွားကြရင် ကောင်းမယ် ……………..တံခါးဖွင့် … ဟေ့ … တံခါးဖွင့်အုံး …``ဟာ …. သုတ … မင်း နောက်ကျလှချည်လား ကွာ…````ဟင် … သုတ အရက်တွေ သောက်လာတယ်````ဟုတ်တယ်……````ထူးဆန်းလိုက်တာ …. ငါတို့လဲ မပါဘဲနဲ့ … ခါတိုင်း တိုက်ရင်တောင် သောက်တာ မဟုတ်ဘူး ဘာဖြစ်လာတာလဲ ````ဘာဖြစ်လာတာလဲ … ဟား… အရက် သောက်တယ်ကွာ … စိတ်ညစ်လို့ … ညစ်ယုံတင်မကဘူး … သေပစ်လိုက်ချင်တယ်… လောကကြီးရေ … ဒီကောင့်ကို သေခွင့်ပေးပါအေ့….````သိပ်မအော်နဲ့ …. ဘာဖြစ်လို့လဲ …````မင်းတို့လေ… မင်းတို့ … သုတ ဆိုတဲ့ ကောင်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းကြီးတွေ ငါဆရာကိုးကွယ်မှားသွားပြီ… အေ့ … ဘဝမှာ ဂျူးသိပ်ကြိုက်လို့ ငါက ချစ်စနိုးနဲ့ ဂျူးဂျူး လို့ ခေါ်တာ… သူက ဒီနေ့ ငါ့ကို ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ…. ငါ့တသက်မှာ… အကြောက်ဆုံး စကားတွေကို သူ့ပါးစပ်က ရက်ရက်စက်စက် ခြွေချရက်တယ်ကွာ…``ရှင့်ကိုတခြား ယောက်ျားတွေနဲ့ မတူတဲ့ ယောက်ျားမျိုး မှတ်နေတာ… တဲ့ … ကျွန်မ ရှင့်ကို ပေးလိုက်တဲ့ အချစ်တွေဟာ အဆုံးစွန်ထိ ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ… နောက်ဆိုရင် ကျွန်မနဲ့တွေ့ဖို့ ဘယ်တော့မှ မကြိုးစားပါနဲ့တော့တဲ့… ကျွန်မ မုန်းတဲ့ ယောက်ျား အမျုိးအစားထဲမှာ ရှင်လည်း ပါသွားပါပြီ …. ကျွန်မ ရှင့်ကို မေ့လိုက်ပြီ … တဲ့ … ကွာ… ``သု ကပြောရင်း … မျက်ရည်တွေနဲ့ ငိုပါတယ်… ကျွန်တော်လဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်ပြီး သုတ ကျောကုန်းကိုဖက်ရင်း … မျက်ရည်ကျမိတယ် …``သုတ … ငါ့ကို မခွင့်လွှတ်ပါနဲ့ကွာ … မင်းစိတ်ထဲမှာ ရှိသလောက် ဆွဲထိုးပစ်လိုက်စမ်းပါ … ငါခံပါ့မယ်… ငါလဲ ငါ့ကိုယ်ငါ မကျေနပ်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေများပြီ … ငါမှားခဲ့ပါတယ်…. နောက်တလဲ ရတယ် …. ````မင်းတို့ အပြစ်ချည်းဘဲမဟုတ်ပါဘူး … ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ စိတ်အကြောင်းကို နားလည်နေတဲ့ ငါကိုယ်တိုင် အမှားကို ကျူးလွန်မိတာ .. ငါ့အပြစ်ပါ`` … ငါသိတယ် ဂျူးဂျူး ငါ့ကိုဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး … သေချာပါတယ်ကွာ … အေ့ .. ငါ့နှလုံးသား ကလည်း အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့တဲ့ နှလုံးသားလို ကြာရင် ရပ်သွားမှာပါဘဲ … ကောင်းပါတယ်…``ကုတင်ပေါ်ပစ်လဲကျသွားတဲ့ သုတကို ကြည့်ရင်း စိတ်ထဲမှာထိခိုက်ကြွေမွကုန်သလို ခံစားရတယ် … ကျွန်တော် ဝရံတာဘက် ထွက်လာခဲ့တယ် … လကြီး သာပေမဲ့ တစ်ခြမ်းပဲ့ နေတယ် … ဒီလို နက်ရှိုင်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုး တခါမှ မခံစားဘူးတာမို့ … ဒီတစ်ခါတော့ ပြင်မရတဲ့ အမှားတွေဟာ ဘယ်အချိန်ထိ ဒါဏ်သင့် နေအုံးမလဲ .. တွေးရင်း … ကြောက်လာမိတယ် … ဖွင့်ဟ ဝန်ခံခွင့် မရှိတဲ့ ငါ့အပြစ်တွေကို …… ငါကိုယ်တိုင် ခံစား ရင်းနဲ့ဘဲ ပြန်ပေးဆပ်ပါရစေတော့……… ပိတောက်မြေ မဂ္ဂဇင်းချောအိမာန်(မန္တလေး)11.10.05 : 10:00 P.M